I-lg g3 yeYurophu ixelwe ukuba ifumana i-Android 5.0 lollipop njengoko sithetha, singatsho ukuba i-usa iyalandela?
Iindaba Kunye Nohlolo
Iindaba Kunye Nokuphononongwa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-LG G3 yaseYurophu kuthiwa ifumana i-Android 5.0 Lollipop njengoko sithetha, singatsho ukuba i-USA iyalandela?
I-LG G3 yaseYurophu kuthiwa ifumana i-Android 5.0 Lollipop njengoko sithetha, singatsho ukuba i-USA iyalandela?
Gcoba, abasebenzisi be-LG G3 yaseYurophu! I-Android 5.0 yeLollipop kuthiwa ikhutshelwa ngaphandle kwinguqulelo yeflegi, izisa iintsimbi kunye neempempe zeGoogle & apos; i-OS entsha yeselula kwi-UI yeLG & apos.
Oku kuthetha ukuba uyilo lweZinto, izaziso ezityebileyo kwiscreen sokutshixa, imowudi entsha yokugcina ibhetri kunye nobomi bebhetri obungcono, inkxaso yeeprofayili zomsebenzisi, ukhuseleko olungcono, ukusebenza okuphuculweyo ngenxa yexesha lokubaleka le-ART, kunye nezinye izinto ezintle.
Inkqubo ye- Inguqulelo yaseMzantsi Korea yomnxeba sele unyangiwe ekuthiwa uhlaziyekile-emoyeni, kwaye i-firmware ngokwayo yavuza ngenxa yovuyo oluhlangeneyo lwabo bonke abasebenzisi ababengengabo abohlobo lwesigulana. Kuxelwe ukuba uhlaziyo lwe-Lollipop sele lubethe abanye abasebenzisi bohlobo lwesiJamani kwisiphatho sesandla, kwaye kulindeleke ukuba i-firmware izakukhupha kancinci kancinci kubasebenzisi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Okwangoku, kubonakala ngathi abathwali be-US ngabo abanoxanduva lokubamba uhlaziyo lwe-G3 & apos's Lollipop eMelika. Ngethemba, abo basebenzisi be-AT & T & ampos; s, Verizon & apos, s, Sprint & apos; s, kunye T-Mobile & apos; s LG G3 ayizukuphumelela & apos; kufuneka balinde kakhulu kulwakhiwo olumnandi olulindelwe kakhulu.
I-LG G3 yaseYurophu ifumana iLollipop
ukuthatha unonophelo lwezinto zemidlalo
Iifowuni ze-android ezinekhibhodi ka-2015
IMotorola iqala ukuvavanya Moto G5 ye-Android 8.1 Oreo
Ungayibona njani kwaye ubuyise kwakhona iphasiwedi egciniweyo, kodwa elityelweyo ye-Wi-Fi kwi-Android
Sebenzisa i-DeX nge-Galaxy Note 9: injani ukusebenza kunye nobomi bebhetri?
Ezona khamera zokhuselo zangaphandle zintle (2018)
I-Apple TV elandelayo inokubonisa inqanaba lokuhlaziya le-4K 120Hz
I-Apple iPhone 7 vs Samsung Galaxy S7
Umda ofihliweyo kwifowuni yakho & apos; s telephoto zoom camera
IPixel XL ngoku ibuyile kwisitokhwe kwiVenkile kaGoogle
Umda we-Samsung Galaxy S6 + vs Google Nexus 6
Ukhetho lweJava kunye nendlela yokujongana nayo